Iindaba-Ukusetyenziswa kwe powder calcium
1. Umgubo weCalcium kwishishini lerabha
Calcium powder for rubber-rubber: (400 mesh, whiteness: 93%, calcium content: 96%). Umgubo weCalcium yenye yezona zinto zinkulu zokugcwalisa zisetyenziswayo kumzi mveliso werabha. Inani elikhulu lecalcium powder ligcwele irabha, enokuthi inyuse umthamo weemveliso zayo kwaye igcine irabha yendalo ebiza kakhulu, ngaloo ndlela kuncitshiswa kakhulu iindleko. Umgubo weCalcium uzaliswe kwirabha ukufumana amandla okuqina aphezulu, amandla okukrazula kunye nokunxiba ukuxhathisa kuneerabha zerabha ezisulungekileyo.
2. Ixabiso leCalcium powder kumashishini eplastiki
I-masterbatch yePlastiki kunye nombala we-masterbatch usebenzisa i-calcium powder 400 mesh. Ubumhlophe bufuneka ukuba buhlale bungatshintshi emva kobushushu obushushu obuphezulu. Ubume be-ore bukhulu be-crystal calcite calcium powder umxholo: 99%, ubumhlophe: 95%), umgubo we-calcium unokusetyenziswa kwiimveliso zeplastiki kuhlobo lwempembelelo yamathambo, inefuthe elikhulu kuzinzo lweemveliso zeplastiki, kwaye yandisa ukomelela kweemveliso, kunye nokuphucula ukuqaqamba komphezulu kunye nokuguda komphezulu weemveliso. Njengokuba ubumhlophe becalcium carbonate bungaphezulu kwama-90, inokuthatha indawo yombala omhlophe obizayo.
3. Umgubo weCalcium kwishishini lokupenda
I-calcium powder i-800 mesh okanye i-1000 mesh yokupenda kunye nepeyinti ye-latex, ubumhlophe: 95%, i-calcium carbonate: 96%, inani le-calcium powder kwishishini lokupenda likhulu, umzekelo, inani elingaphezulu kwe-30% kwipeyinti engqindilili. .
4. Umgubo weCalcium kwishishini lokutyabeka elisekwe emanzini
I-calcium powder i-800 mesh okanye i-1000 mesh yokupenda okusekwe emanzini, ubumhlophe: iipesenti ezingama-95, i-calcium powder: i-96%, i-calcium powder isetyenziswa ngokubanzi kumzi-mveliso wepeyinti esekwe emanzini, ingenza ukuba ipeyinti ingahlali, kulula ukusasaza, I-gloss elungileyo kunye nezinye izinto, kwixabiso lepeyinti esekwe emanzini ngama-20-60%.
5. I-calcium powder yoshishino lwamaphepha
I-325 mesh calcium calcium powder enzima yokwenza iphepha, imfuno emhlophe: 95%, umxholo we powder calcium: 98%, i-calcium powder idlala indima ebalulekileyo kwishishini lokwenza iphepha, inokuqinisekisa amandla kunye nobumhlophe bephepha, kwaye iindleko ziphantsi.
6.I powder yeCalcium kwishishini lokwakha (udaka owomileyo, ikhonkrithi)
I-calcium powder i-325 mesh yomdaka owomileyo, imfuno emhlophe: 95%, umxholo we-calcium powder: 98%, i-calcium powder idlala indima ebalulekileyo kwikhonkrithi kwishishini lokwakha. Ayisiyi kuncitshiswa kuphela indleko zemveliso, kodwa kunye nokuqina kunye namandla emveliso anokunyuswa.
7. Umgubo weCalcium yoshishino lokucoca umlilo
I-calcium powder i-600 i-meshes yokufakelwa komlilo, imfuneko yobumhlophe: 95%, umxholo we-calcium powder: 98.5%, i-calcium powder kufuneka isetyenziswe kwinkqubo yokuveliswa kweesilingi ezingenakucima umlilo, ezinokuphucula ubumhlophe kunye nokukhanya kwemveliso, kunye nokusebenza komlilo. iya kwanda.
8. I-calcium powder yoshishino lweemarble
Calcium powder for marble ngumntu 325 mesh, mhlophe mfuneko: 95%, calcium powder powder: 98.5%, pure and free of impurities, calcium carbonate has been used ngokubanzi in production marble marble.
9. Umgubo weCalcium kwishishini leethayile zomgangatho
I-calcium powder i-400 mesh yeethayile zomgangatho, imfuno emhlophe: 95%, umxholo we-calcium powder: 98.5%, inyulu kwaye akukho bumdaka. Calcium powder ingasetyenziswa kwishishini lokugrumba phantsi ukwandisa ubumhlophe kunye nokuqina kwamandla emveliso, ukuphucula ubungqongqo bemveliso, kunye nokunciphisa iindleko zokuvelisa.